CAJIIB: Didier Drogba Oo Wali Laf Dhuun Gashay Ku Ah Arsene Wenger & Wacdarihii Uu Ka Dhigay Kulankoodii Xalay - Laacib
CAJIIB: Didier Drogba Oo Wali Laf Dhuun Gashay Ku Ah Arsene Wenger & Wacdarihii Uu Ka Dhigay Kulankoodii Xalay
Halyeeyga kooxaha Chelsea iyo Marseille ee Didier Drogba ayaa markale ugaadhsaday tababarihii Arsenal ee Arsene Wenger oo ay kulan sadaqo ururin ah iskaga hor yimaadeen.
Drogba ayaa metelayay kooxda ku ciyaaraysay magaca halyeeyada Marseille halka Wenger uu ahaa tababaraha kooxda UNICEF. Weeraryahankii hore ee xulka Ivory Coast ayaa ahaa mid jecel inuu kahor tago Wenger iyo Arsenal.
Drogba ayaa kulankaasi xalay markale madax-xanuun kusoo riday Wenger isaga oo saddexley kasoo dhaliyay kooxda uu watay xilli uu hore uga haystay rekoodhka ah inuu 15 gool kasoo dhaliyay 16 kulan oo uu Arsenal kaga hortagay.
Marka laga yimaado inuu mudo saddex sano kahor ah ka fadhiistay kubadda cagta haddana Drogba ayaa wali u muuqday mid gool dhalintiisii ay halkeedii tahay waxaana uu saddexda goolba u dhaliyay qaab cajiib ah.
Kooxda Arsene Wenger hoggaaminayay ayaa hoggaanka 2-1 ku qabatay ciyaarta ka dhacaysay gegida Stade Velodrome kahor inta uusan Didier dhalinin saddexdiisa gool.
Ugu dambayntii ciyaarta ayaa kuso dhammaatay guul 7-4 ah oo ay gaadheen kooxda halyeeyada Marseille. Waxa xusid mudan in Drogba uu dabaaldegiisii caanka ahaa sameeyay markii uu shabaqa la gaadhay goolka saddexaad.